Ụgbọ elu Tweed-New Haven na Tampa na ụgbọ elu Avelo ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Tweed-New Haven na Tampa na ụgbọ elu Avelo ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu Avelo Airlines na-apụ ọdụ ụgbọ elu Tweed-New Haven (HVN).
Ụgbọ elu Avelo malitere ọrụ site na ọdụ East Coast ya na HVN na Wednesde gara aga (Nọvemba 3) yana ụgbọ elu mbụ ya na Orlando. Tampa Bay bụ nke atọ n'ime njem isii ama ama Florida Avelo Airlines na-eje ozi site na HVN.
Ọrụ a na ụgbọ elu Boeing Next Generation 737-700 na-arụ ọrụ Mọnde, Fraịde na Satọde.
Ụgbọ elu ahụ na-apụ HVN na 2:30 ehihie rutere TPA na 5:25 mgbede.
Ụgbọ elu na-alọta na-apụ TPA na 6:15 ehihie na-erute HVN na 9:00 ehihie
Ụgbọ elu Avelo ga-arịgo ruo ebe Florida nke atọ ya taa site na ọdụ ụgbọ elu Tweed-New Haven (HVN) - Tampa Bay.
"Anyị nwere obi ụtọ ịpụ maka njem Avelo nke atọ Florida n'ehihie a," Onye isi oche Avelo na CEO Andrew Levy kwuru. "Anyị na-eme ka ọ dịrị ndị bi na South Connecticut mfe ma dịkwa mfe iru Tampa. Site n'ụgwọ mmalite mmalite anyị dị ala, Tampa na ebe anwụ Florida ise Avelo na-eje ozi dị ugbu a karịa mgbe ọ bụla."
Ọrụ a na ụgbọ elu Boeing Next Generation 737-700 na-arụ ọrụ Mọnde, Fraịde na Satọde. Ụgbọ elu ahụ na-apụ HVN na 2:30 ehihie rutere TPA na 5:25 pm Ụgbọ elu na-alọghachi na-apụ TPA na 6:15 pm rutere HVN na 9:00 ehihie.
Onye isi oche ọdụ ụgbọ elu Tweed-New Haven Sean Scanlon kwuru, "Mpụpụ mbụ nke taa ga-aga Tampa Bay bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ na mmekorita anyị na Avelo na-eto ngwa ngwa na HVN." "Ike ebe a n'ọdụ ụgbọ elu na n'ime obodo n'ime ụbọchị ole na ole gara aga bụ ihe ịtụnanya ka anyị na-amalite oge ọhụrụ na nke dị egwu na HVN."
Ụgbọ elu Avelo butere ọrụ site na ọdụ East Coast ya na HVN Wenezde gara aga (November 3) ya na ụgbọ elu mbido ya na-aga Orlando. Tampa Bay bụ nke atọ n'ime ebe Florida isii ewu ewu Ụgbọ elu Avelo na-eje ozi site na HVN. Na mgbakwunye na Fort Lauderdale (nke malitere ọrụ na Fraịde gara aga), Orlando na Tampa Bay, Avelo ga-amalite ife efe na Fort Myers, Palm Beach na Sarasota na ụbọchị na izu ndị dị n'ihu.
N'etiti igwe mmadụ, ogologo ahịrị, ogologo ije na mkpọkọ okporo ụzọ na-ezute n'ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ nke ndị njem Connecticut na-agakarị, HVN na-enye ahụmihe ọdụ ụgbọ elu obodo obodo ọzọ dị mma na-enye ume ọhụrụ. Ọnụnọ HVN n'akụkụ ọtụtụ nnukwu okporo ụzọ na okporo ụzọ ụgbọ oloko na-eme ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ elu Connecticut kacha adaba na mfe ịnweta.
Avelo bụ ụgbọ elu izizi na-enye ụgbọ elu anaghị akwụsị akwụsị n'etiti HVN na Florida. Ọbịbịa Avelo na HVN bụkwa akara mgbasawanye nke ọrụ na HVN n'ime ihe karịrị afọ 30. Avelo na-etinye $1.2 nde iji nyere aka kwalite na imeziwanye akụrụngwa na arụmọrụ dịka akụkụ nke ọrụ nde $100 n'ozuzu ya na HVN. Mgbasawanye ọdụ ụgbọ elu ahụ ga-agụnye ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ yana ogologo ụzọ ụgbọ elu nke onye ọrụ ọdụ ụgbọ elu Avports na-ebute ụzọ.
N'ime ụbọchị 90 gara aga, Avelo goro ihe karịrị 85 HVN sitere na Crewmembers (ihe ụgbọ elu na-akpọ ndị ọrụ ya), gụnyere ndị na-eje ozi ụgbọ elu, ndị na-anya ụgbọ elu, ndị nnọchianya ọrụ ndị ahịa ọdụ ụgbọ elu, ọrụ metụtara ọrụ, yana ndị njikwa na ndị nlekọta. Avelo na HVN na-atụ anya inwe karịa 100 ọkachamara ụgbọ elu dabere na ọdụ ụgbọ elu na njedebe nke afọ a.